Izici zezindaba ze-MBR-Industry-Shenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd
Isikhathi: 2020-04-15 Hits: 50
Uma kuqhathaniswa nezindlela zokwelapha zamanzi zendabuko, i-MBR inezici ezilandelayo ezisobala:
1. I-MBR ingabamba ngempumelelo ama-microorganisms emgodini wokukhucululwa kwendle, futhi ibone ukwahlukaniswa kweminyaka yobudala be-sludge nesikhathi sokugcinwa kwe-hydraulic. Ngokulungisa usayizi wobudala be-sludge, ama-microorganisms anomjikelezo wokukhula isikhathi eside njengamabhaktheriya angenisa amandla kanye nama-bacterium angama-denitrifying nawo angaba ngamagciwane agqamile, ngezinga elithile, ukusebenza kahle kwe-nitrogen yokususa yonke i-reactor kungathuthukiswa, okwenza ukusebenza kuguquguquke ngokwengeziwe futhi zizinzile.
2. I-MBR inamandla okusebenza okuhlukanisayo okuqinile okuwuketshezi olusezingeni eliphezulu, umphumela omuhle futhi ozinzile wokuqina, kanye nomthelela omncane kukhwalithi yamanzi anethonya. Ngenxa yomthelela omuhle kakhulu wokubambisa ulwelwesi, izinhlayiya ezikhudlwana, ama-molecule e-organic kanye nama-bacteria ku-reoror abambeke echibini lamanzi eliseceleni kolwelwesi. Ngaso leso sikhathi, asikho isidingo sokucabanga ngokwanda kwe-sludge.
3. Iqoqo le-sludge liphezulu futhi okuphumayo okusele kwe-sludge kuncane. I-MBR ingaqhutshwa ngaphansi kwezimo zomthamo omningi nomthwalo we-sludge ophansi, kanti umphumela osele we-sludge uphansi, okunciphisa kakhulu izindleko ezilandelayo zokwelashwa.
4. I-Reactor ye-MBR inesakhiwo esiyinhlanganisela nemishini yokusebenza yenqubo, ngakho-ke ithatha indawo encane, futhi kulula ukubona ukuphathwa kokuzenzakalelayo okusebenzayo kanye nokusebenza okusebenzayo nokuphatha.
Yize i-MBR inezimpawu ezingenhla, ibuye ibe nokubi, njengokungcola okukhulu kwe-membrane, izinga lokusebenzisa umoya-mpilo ophakeme, izindleko ezinkulu zokutshala, ukusetshenziswa kwamandla aphezulu kokwelashwa kwamanzi, kanye noketshezi lokuhlanza imfucumfucu lwamakhemikhali luzodala ukungcoliswa kwesibili. Ezisebenzisweni ezisebenzayo, ukufihlakala kwe-membrane kuyinto enkulu kakhulu ethinta ukukhuthaza i-MBR.
Okwedlule: Umqondo we-biofilm-membrane bioreactor
Okulandelayo: Research process and application of MBR